SANTOSH PAUDEL'S BLOG : November 2011
Posted by Santosh Paudel at 8:08 PM No comments:
उत्साह कम्ति थिएन । खुशी उत्तिकै । जताततै माला र फुल । घर रङ्ग्याउने र पिलपिले बत्ति टाङ्ग्ने काममा छिमेकीबिच होड बाजी नै थियो । कोही पनि घर सजाउनमा अल्छे देखिन्नथे । बाटामा हिड्दा प्रत्येक घरमा भलाकुसारी गरेको आवाज सुनिन्थ्यो । प्रदेश गाको छोरा नाती भाइभतिजा आका होलान् । धैरै जम्मा भएकाले कुरोमा कुरो चल्यो होला । म मन मनै गम्दै हिँडेको थिए । के के न बिते झैँ तल्ल घरे साइला काका भने जोडले कराउँदै थिए । एउटा छोरा हो क्यार ! गाउँमा नै छ रे ! डकुलन्टे मोरा के गर्छ कुन्नी । हाउडे न हो । त्यसो नभाको भए त त्यत्रो सम्पत्तिवाला गतिलो चाला देखाइहाल्थ्यो नी । तीनपल्ट लगाएर एस।एल।सी कटायो । बाउले शहरमा पढाउँछु भन्दा शहर जान नमानेर बाउलाइ नै लप्पा ख्वाइदियो । पक्कै कता उड्यो । तै भर डाको छोड्या होला…॥
हिजो मात्र गाउँ आको । उता शहरमा कम्ता हर्षोल्लास थिएन । पट्का उत्तिकै पट्काउँथे । मान्छेको चहलपहल धेरै नै थियो । यता भने कस्तो सुनसान । सुनसान पनि किन नहोस् । अस्ति भर्खर घरै अगाडी गाडी पल्टेर दर्जनौ मान्छे पाँखामा छरप्रस्ट देखेका गाउँले अझैँ त्रसित छन् । काको मान्छे बाच्थे त ! त्यत्रो सिङ्गो गाडिमा चारवटा पाङग्रा चै थे रे ! त्यो पनि रबरको भएर । बाँकी सबै पार्टपुर्जा धुजाधुजा । धन्न दुईचार जना हामफालेर बाचेछन् । पुर्नजन्म पाए तीनले । तीनका जय जय होस् ।
तिहारको चहलपहल बढ्दो थियो । कोही किनमेल गर्न बेसीटार बजार हिडेको भन्थे । कोही दिदीबहिनी लिन । कसैको दाजुभाइ बेसीटारमा भर्खर गाडिबाट ओर्लेरे फोन आथ्यो रे । दुई हुल फुच्चेहरु छेवैबाट बेतोडले हुइकिए । ल हेर ! सिकेदाई कि छोरी त माला उन्न सक्ने भैछ । कसका लागि उनेकी है मोरी । तेरी आमाले भाइ त जन्माकी छैनन् । घरमा त एक्लै हो । खै बा आमा । पसल्नी आन्टीले सम्झेँथे भन्दे है । गाउँ नै थर्किने गरी ठूला स्वरले फतफताउँदै पसल्नी काकी उकालो लागिन । भारी पनि ठूलै थियो । पसलका सामान होलान् । तिहार लाइछ क्यारे ! काकी मिहिनेती छिन् । काका भने बेकम्मा । केही गर्दैनन् । तै सानो पसलले धन्न व्यवहार धानेका छन् ।
गाउँ सानो हेर्दा चुटुक्क परेको । पहिल्या चाँड पर्व आउँदा शहरको भन्दा कम्ता रमाइलो हुन्थेन । ५२ घरधुरीको दुई टोलः तल्लो टोल र माथिल्लो टोल । एउटै बाजेका सन्तान । पहिल्या खुब मिल्थे रे ! पर्दा मर्दा कसैले गुहार्दा गाउँनै जुट्थे रे ! तर आजभोलि त्यस्तो एकता थिएन । खै किन हो कुन्नी केही कुरा बुझ्नै गाह्रो । कसैले कसैलाई गन्दैनथे । अर्काले तपै भनोस् या नभनोस् आफै मपै हुन्थे । त्यति राम्रोसँग कोही कसैसँग बोल्दैनथे । बाटामा भेटेकालाई बोलाउन खोज्यो चिडिँएर हिड्थे । आफ्नै शाक्य दाजुभाइ हुन् तैपनी ठुस्केर मुन्टो बटार्दै बाटो तताउँथे । दुईचार वर्ष भयो शहर पसेको गाउँमा के भैरा'छ हाम्लाइ थाहा नहुने । तैपनि बाले फोनमा भन्थे । झगडा खुब गर्न थाल्याछन् खै के भैछ कुन्नी । सानो कुरामा नि एक्कासी गम्किन्छन् । आजभोलि एकअर्कासँग खुब रिसिबी राख्छन् । दाजुभाईबिचमा राम्रो घुलमिल छैन । बोलचाल ठप्पै छ । बाले फोनमा भने झैँ वास्तवमै एकता भन्ने नामो निसानै रैनछ । मेलमिलाप त टाढाको कुरा । यत्तिसम्मको रिसिबि र मनमुटाब रैछ कि अस्ति गाडिपल्टेर छरप्रस्ट लास लडे झैँ गाउँका दाजुभाइमा भएको आन्तरिक द्धेषले सिङ्गो गाउँ नै भद्रगोल र छरप्रस्ट भा'रैछ ।
दुई घर माथि भलायखर्कमा बिजुली बलेछ । हाम्रोमा आ रैनछ । नआउने नै भएछ । हाम्रो तिर बल्ने बत्ति अन्तै गएछ ! गाउँका दाजुभाई पहल गर्न गएनछन् । किन हो कुन्नी ! दाजुभाइमा मति बिग्रेर होला । धारामा पानी नआको दुई महिना भा रैुछ । पानी बनाउँन पनि गएनछन् । पल्लो टोलका सबै मिलेर बनाएछन् । तिमरलाई पानी दिन्नम भनेछन् । हाम्रो तिर आउने पाइप नै काटेर ठेडी ठोस्देछन् । अनि के को आउथ्यो पानी । वर्ष अघि नै बाटो बन्या थियो । सबैले बेसीटारबाट जिल्ला शहर जाने छोटो बाटो भन्थे । शुरुका दुई चार महिना गाडि मज्जाले गुड्यो । तर आजभोलि के का गाडि गुड्नु कमिला तक हिड्न छोडेछ । बाटाभरी घाँस उम्रेछ । ठाँउ ठाँउमा डिल भत्केर थुम्का जम्मा भएछ । मर्मतका लागि फेरि जिल्लामा पहल गर्न गएनछन् । त्यही मौका छोपी पारीका गाउँलेहरुले जिल्लामा पहल गरेर डाँडापारीबाटै बाटो छिचोलेछन् । अहिले उतैबाट गाडि जिल्ला शहर जादो रैछ ।
तिहारको चपेटाले गर्दा त्यति राम्रोसँग गाउँ घुम्न पाएको थिइन । फुस्रद मिलाएर घुम्नु पर्ला भन्ने मनमा चै थियो । गाउँलेहरुबीचमा देखिएको अध्याँरो तीक्ततामा ज्योती छर्न आवश्य देखिन्थ्यो । १० बर्षे जनयुद्धमा एक नेपालीले अर्को नेपालीबीच भत्काएको आत्मीय सम्बन्ध आज मेरा गाउँलेदाजुभाइहरुले फेरि एक आपसमा भत्काउँदै थिए । आखिरि वास्तविकता भित्र लुकेको समस्याको जड के थियो त्यो भने कसैमा स्पष्ट थिएन । अस्पस्टतामै एक आपसमा रिसिबिको खाडल बढाउदै थिए । यसरी दिन दुई गुणा रात चौगुना गरी बढ्दै गएको खाडललाई समयमै रोकि गाउँलेदाजुभाइहरुबिचको सम्बन्धमा मिलेमतो ल्याउनु हामी सबैको लागि आवश्यक देखिन्थ्यो । जन्म र कर्मको दुबै थलो भएकालॆ समस्याको समाधान गर्नु नीतान्त आवश्यक थियो ।
आठ बजिसक्यो अझै सुतिराछ के कुम्भकर्ण झैँ सुतिरा ! उठ्ै कान्छा ! चिनि सकिएछ । बिहानै चिया पिउन पाइएन । जा पसलमा गएर लेरा । छेवैमा आएर आमा मलाई उठाउँदैै हुनुहुन्थ्यो । उठ्ने मन नहुँदा नहुँदै म उठे र कसैसँग नबोलि पसलतिर उकालो लागे । मकै घारी छिचोलेर कान्ला उक्लिदै गर्दा ईश्वरसँग झम्का भेट भयो तर ऊ कार्कीबारे दमाई ठुस्के झैँ ठुस्किएर गयो नमज्जा लाग्यो । खै ! के भाछ कुन्नि । बोल्दै नबोलि गयो । सानामा कम्ता जम्थ्यो यस्को र मेरो जोडी । अस्ति सम्म बोल्दै थियो । आज के भयो कुन्नि खै किन बोलेन । म निराश मुद्रामा त्यहाँबाट पसलतिर हान्निए ।
यो सब्को भाइभतिज हो । यस्को बास उठाउँन पाइन्छ । अस्ति भैंसी बेच्यो । हिजो मकै । आज घरको ढोका बेचेछ । लिनेले बुझ्नु पर्दैन् । यस्को आमा छैन् । बाउँ त यो जन्मिनु अघि नै बितेको थियो । एक्लो छ मुर्ख छ । बुद्धि त एकरत्ति छैन् । यस्तालाई फकाएर सामान लिनुहुन्छ । आज जस्ले यस्को सामान लिएको छ म त्यस्को ढाड नखुस्काइ का छोड्छु र ! । होहल्ला गर्दै दुई ग्रुप ग्वार्र्र्………मथिल्लो टोलबाट डाका छोड्दै तलतिर छेवैबाट कुदे । म झस्किए । डरले शरिर काप्न थाल्यो । फर्केर हेर्ने हिम्मतै गरिन तैपनि आवाज भने सुन्दै थिए । सत्तो सराप्नेमा उसैको काका रैछ । सामान बेच्दै र_िक्स पिउँछ भन्ने चै सुन्या थिए तर एकिन भने थिइन । कुरो सत्य नै रैछ भर्खर थाहा पाए । पोहोर सालसम्म केटो राम्रै थियो । अब त रक्सी नखाइ बस्न नसक्ने नै भएछ । त्यै भएर पो अघि ठुस्केर हिड्या रैछ । साथिहरुले कुरा त गर्थे एक थोपा रक्सी घुट्क्याउन पाएन भने जाडोले कामे झैँ काम्ने भाछ भनेर तर पत्याएको भने थिइन । थुइया ! विग्रेछ पो ईश्वरे त । पसलतिर हानिएको म त्यही हुलतिर लागे । गाउँलेहरु सबै भेला भा रैछन् । चर्का चर्कि बढ्ढै थियो । सामान लिनेमा माथिका ठुलारबा रैछन् । ईश्वरेको काका र ठूलाबा बिचमा गम्सा ग_िम्स बेस्मारि कस्सिदै थियो । कुरामा कुरो चल्दै जाँदा एकले अर्कालाई नानाथरी आक्षेप लगाउँदै थिए । कसले के भन्दियो कुन्नि रिसले तात्तिएका काका झ्याप्पै ठूलाबाको घाटि न्याक्न पुगि हाले । छिनमै गाउँलेहरुबीच झडप हुन थाल्यॊ । वाइसेल र युथफोस्र झैँ दूई तीन गुटमा गाउँलहरु छुट्टिए । एक गुटले अर्को गुटलाई रगतको नाता बिसे्रर पिट्न समेत पिटे । कोहिको बाउसँगको रिसिभि कोहिको घाँस चोरेको कोहिकॊ श्रीमतिसँगको झगडा कसैको पानिपधेँरो र बाख्रा बारिमा पसेको पुरानो रिसिब छ लू ! आइज भन्दै एक अर्का माथि त_िम्सदै थिए । आज तँलाई नमारि छाड्दीन । तैले धेरै नै भयो निउ खोजेको । यसरी आँखा आगाडि १९ दिने जनआन्दोलन झैँ गाउँलेदाजुभाइहरुबीच झगडा भएको देख्दा म रनभुल्लमा परे । कस्तो रिसिबि । के का लागि रिसिबि । किन रिसिबि । केही बुझ्न सकिन । पहिल्येको कुखुरो मार् या । बाख्रा खेतमा चर् या । भतिजको सम्पत्ति देखेर लुट्न खोज्या । यस्तै सुनियो र देखियो पनि । न केहि बोल्न सके न केहि सोच्न । म मा यसबारे शुन्यता थियो । बस्नु उचित नभएकाले म निरास मुद्रामा घरतिर लागे । घटौँ पछि झगडा साम्य भएछ । कसैको टाउको फुटेछ कसैको नाखि्र । कोहि रमाउँदै पनि थिए रे ! घर पुगे आमाले झाको झार्नु भयो । किन गाको त्यहाँ मर्न मन ल्याइछ कि क्या हो । चिनि लिन बिहानै निस्केको मान्छे अैले सम्म अत्तोपत्तो छैन । धन्न केहि भएनछ । मेरो त ज्यानै निकालिस नि ! खाना खाएर घाँस लिन जानु । कसैको घरमा जानु पर् या छैन । आज देउसी खेल्ने दिन हो क्यार ! पर्दैन जान । बिहानको झगडा देखिस् हैन । आमा एकसुरमा मलाई कराउँदै थिए तर वास्ता नगरी म एक गिलास पानि पिएर ओछ्यानमा पल्टिए । भुसुक्कै निदाएछु । त्यसपछि खै ! कसरी दिन बिते पत्तै भएन । न पहिल्याको जस्तो रमाइलो थियो न देउसीभैलो नै खेलियो । पहिल्येको जस्तो जुवा न तास । जति खेल्नु छ जति रम्नु छ आफ्नै घर घर भन्दा बाहिर केहि छैन मात्र डरै डर ।
Posted by Santosh Paudel at 4:02 AM No comments: Links to this post
Posted by Santosh Paudel at 3:06 AM No comments: Links to this post
राष्ट्रका निम्ति 'कल्पवृक्ष'हरु
नेपाली आमाले जन्माइन हुर्काइन
र फलदायी 'कल्प वृक्ष' बनाईन्
तिनै 'कल्प वृक्ष'ले फलाएका
कुनै सुपुत्रहरु मेरर 'शहिद' भए,
तिनै 'शहिद' को रगत माथि
टेकेका अर्का सुपुत्रहरु त !
'विष वृक्ष'ले जन्माएका जस्ता पो ! भए
ती 'दानव' भएर निस्के,
'बन्द', 'हड्ताल' र 'कू' गर्न तड्पिए
कैयौँ नेताको हातमा अड्किए
कैयौँ िहंसा हत्या र विकृतिमा होम्मिए
तिनै फलदायी कल्पवृक्षका कैयौँ सुपुत्रहरु !
घातक विष वृक्ष बनी उमि्रए
यिनले दुःख दिन थाले पोल्न थाले
जम्न खोजे रम्न खोजे र हडप्न खोजे
हाम्ले प्रतिकार गर्न सकेनौँ
लखेट्न नी सकेनौँ !
आखिर यी दृष्ट वक्ष के चाहन्छन्
किन आफैँ छटपटाउँछन्
शान्तिको भूमिमा युद्ध झोस्न चाहन्छन्
यिनमा विश्वास कसरी लिने
देशलाई त विगार्छन् नै हाम्लाई समेत मार्ने पो हो कि
मातृभूमिको अस्तित्व लुट्ने पो हुन् कि
होशियार ! बन्नुैपर्छ अब हामी
समय फेरिएको छ बदलिएको छ
राजनैतिक अस्थिरता छ
आफ्नै भूमिमा दाजुभाई काटिएका छन् मारिएका छन् र कुटिएका छन्
यी सबै कू-कार्यमा
'कल्प वृक्ष कि विष विक्ष'
Posted by Santosh Paudel at 10:39 PM No comments: Links to this post